Were a Danube osimiri nrughari ma ọ bụrụ na ị na-enwe akụkọ ihe mere eme, enwekwa nri, na agaghị echefu echefu ahụmahụ. Njem site na oge a na obodo nke Amsterdam na Western Europe na Danube na ji nwayọọ nwayọọ na-abanye Eastern Europe agafe akụkọ ihe mere eme akara, dị ka Salzburg (obodo music), ma ọ bụ mapụ ileta mbibi Ogwe ke trendy Budapest. Nke a collection of European osimiri cruises ga-ekpochapụ gị pụọ n'ime a dreamlike ohere jupụtara ọhụrụ ahụmahụ, nlegharị anya, ụda, na-esi isi, na nsogbu gastronomic.
Rhône River bụ a akụkọ ihe mere eme osimiri nke Switzerland na France na otu onye nke kasị dị ịrịba ama waterways of Europe. Ọ na-ijuanya na ọ bụ na anyị na ndepụta nke The 5 Kacha mara mma osimiri na Europe inyocha.
Ọtụtụ n'ime ndị obodo nwere atụmatụ na a mara ha, akowa na ha adị, na-eme dị ka usu na-agba site na obodo obi. The Seine River na Paris bụ ihe River Thames bụ London, na Danube na Budapest. Ọ bụ ebe oria a kachaa, ebe ndị njem nleta na-akwaga, ebe ha na-edebe ama nkiri ma weghara ncheta.
Anyị na-eche na ị nwere ike n'ụzọ nkịtị na-ahọrọ dị nnọọ banyere onye ọ bụla n'ime ndị Seine cruises nyere na ị ga-enwe mmechu ihu! Ị ga-enwe ike ịhụ ndị kasị mma nke Paris, obodo ịhụnanya. Your nhọrọ bụ dum sitere na. Ọ bụrụ na ị abaghị oge, cruises dị dabara n'ime gị obere oge e. N'ihi na a ọzọ tọrọ-azụ vibe, enwe a Seine nri abalị ụgbọ, na-ele anya n'elu eiffel tower na Louvre ngosi nka, dị ka ị na-ụgbọ mmiri site. Ma ọ bụ i nwere ike ikpokọta ndị a na-adọrọ mmasị na nrughari maka nanị ngwakọta, ịrị nke abụọ nke ụlọ, enwe mmasị echiche, Ọzọkwa iri a njem ụgbọ mmiri, ụtọ nri abalị na a iko mmanya. Ị nwere ike ọbụna iri na a Moulin Rouge show ma ọ bụrụ na gị fancy? Na-ele ezigbo Paris, a Seine nrughari bụ kwesịrị.
The obere osimiri, ọwa mmiri, na oke osimiri nke Netherlands mebere Dutch Waterways, na cruising ebe a bụ a-atụrụ ndụ ụzọ inyocha Europe na ya egbu ala mba. Mmụta gburugburu obodo Amsterdam na Rotterdam mgbe egosi na itineraries, ma isi ihe nke a Dutch Waterways osimiri ụgbọ bụ usoro nke 19 authentic ákwà ifufe na kwụ n'ahịrị na kanaal mmiri n'ógbè Kinderdijk. Kwadebe igwefoto gị.
Dokwara ebube bụ Ifuru ngosipụta na Keukenhof, ndị kasị ibu ifuru ubi. Egbuke carpets nke na agba na-kere nde asaa tulips, daffodils, na okooko osisi ndị ọzọ - kacha mma dị mma n’oge Eprel na Mee. Lezienụ anya maka mkpumkpu cruises n'oge a nke afọ kpọmkwem ilekwasị anya Dutch bọlbụ ubi.
All n'ụgbọ! AKW thatKWỌ na ụgbọ oloko tiketi gị Osimiri njem na Save A Train taa ma na-enweta ụgbọ mmiri!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Kasị Beautiful Rivers Na Europe Iji Explore” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-rivers-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Ndị Europe #imonaboat #njem mmiri #njem osimiri